‘यस्तो छोरा गर्भमै तुहीनु जाति’ कन्सिरी तताउने भिडियो, विचरा ! विरामी वृद्धा आमा « Naya Bato
‘यस्तो छोरा गर्भमै तुहीनु जाति’ कन्सिरी तताउने भिडियो, विचरा ! विरामी वृद्धा आमा
नयाँबाटो, भनिन्छ, संसारमा भगवानको रुपमा आमालाई देख्न सकिन्छ । सबैको रक्षा गर्न भगवान सरह हरेक ठाउ पुग्न नसक्ने हुनाले सबैको लागी साक्षार भगवान हुनुहुन्छ ।
आमाको रुपमा त्यसैले बाबा भन्दा पनि आमाको महत्व धेरै नै हुन्छ । चाहे त्यो कुनै मानव होस् या कुनै पशु नै, आमाको माया भनेको अतुलानिय र जसले आमाको माया र छाया पाइरहेको हुन्छ । उ नै संसारको एकदमै भाग्यमानी मान्दा हुन्छ यसरी आमाको वर्णन जति गरेपनि कम हुदैन ।
तर सबैको लागी आमा भन्ने बित्तिकै एकनाश नहुँदा रहेछन । आजको युगमा आमालाई हेला गर्ने र पिट्ने मात्र होईन बुढी वृद्धा आमाको हत्या नै गर्यो पापी शिक्षक भनाउदो छोरोले ।
एउटा यस्तो भिडियो क्यामेरामा कैद भयो हेर्दा असामान्य लाग्छ होला तर यस्ता पिसाच अधर्मी पापी अझै पनि धर्तीका बोझ बनेर बाचिरहेका छन् । आमाको माया पाउन र सेवा गर्न पाउ भनेर कत्तिले त्यस्तो सौभाग्य पाएका हुदैनन्, तर यहा देखिएको दृश्यमा आमा भन्ने शब्द नै यो कुकुरको लागी गाली जस्तो लाग्ने व्यवहार गरेको छ ।
८२ वर्षिया बुढी बिरामी आमालाई पापी छोराले यसरी निर्मम तरिकाले कुट्यो अन्तत आमाको मृत्यु भयो । दाहासंस्कार समेत भयो तर हत्याको कुनै अत्तोपत्तो चलेन तर जव यो भिडियो भाईरल भयो आमाको हत्या गर्ने पापी छोरो फरार छ । बाँकी तल दीएको भिडियोमा हेर्नुहोस: